२०२१ मा चम्किरहेका कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिको भाग्य, अन्यको कस्तो ? (भिडियो) – Krazy NepaL
March 13, 2021 2183
काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०२१ ले धेरै राशिका मानिसका लागि खुशी उपहारहरू ल्याउन सक्छ। ज्योतिषीहरूका अनुसार, २०२१ मा यी पाँच राशिका व्यक्तिहरू धेरै भाग्यशाली हुनेछन्।यस वर्ष कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशिका व्यक्तिका लागि नयाँ वर्ष धेरै प्रकारले लाभदायक साबित हुनेछ। धन र आयका स्रोतहरूले मात्र यी राशिहरूमा वृद्धि हुने छैन, परिवारमा खुशी र शान्तिको वातावरण पनि हुनेछ। आउनुहोस् जानौँ नयाँ वर्ष २०२१ का लागि १२ राशिको भाग्यफल कस्तो रहनेछ ?
नयाँ वर्ष २०२१ मा, मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले भविष्यमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्छन् भने तिनीहरूले आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। शुरुआती दिनमा स्थिति तलमाथी हुनेछ। जनवरी–फेब्रुअरीमा बेरोजगार मानिसहरू होशियार हुनुपर्छ। तपाईको कर्मले भगवान् शनिदेव अस्थिर रहनुहुनेछ।
व्यापार व्यवसायका लागि समय उत्तम हुन्छ। आय बढाउन धेरै अवसरहरू आउनेछन्। अभिभावकलाई स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। तपाईंले सेप्टेम्बर र नोभेम्बरका बीचमा आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जबकि जनवरी, मार्च, मे, जुलाई र नोभेम्बरको समय विद्यार्थीहरूका लागि धेरै अनुकूल हुन्छ, तपाईं फेब्रुअरी, अप्रिल, जून, अगस्ट, सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा सतर्क रहनु वेश हुनेछ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
नयाँ २०२१ मा यस राशिका रोजगारदाता पदोन्नति र प्रगतिबाट लाभान्वित हुनेछन्। तपाईले यस क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। तर व्यापारिक वर्गका लागि, आर्थिक जीवनमा नतिजा थोरै कम हुनेछ। आर्थिक कठिनाइ हुन सक्छ। ग्रहहरूको स्थितिले विद्यार्थीहरूका लागि समय अलि गाह्रो हुने देखाउँदछ। राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यस बाहेक, पारिवारिक सुख शान्तिमा कमी आउन सक्छ। वैवाहिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्नेछ। स्वास्थ्यको हिसाबले समय चिन्ताजनक छ, किनभने राहु–केतुको उपस्थितिले तपाईंको स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउन सक्छ।
नयाँ वर्ष २०२१ मा तपाइँको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू सामना गर्नुपर्ला । नोकरी, पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले सहयोगीबाट सहयोग नपाएका कारण समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। पदोन्नती र ठूलो लाभका लागि मात्र पर्खनु पर्दछ। व्यापारका लागि समय राम्रो रहनेछ। ठूलो लेनदेन गर्दा विशेष ध्यान राख्नुहोला। वर्षको सुरुवातीमा आर्थिक जीवनमा धेरै राम्रो हुनेछ। बीचमा केहि समस्याहरू हुन सक्छन्। वर्षको बीचमा पैसा गुम्ने सम्भावना छ। यस वर्ष विद्यार्थीहरूले कडा परिश्रम र प्रयासपछि मात्र सफलता प्राप्त गर्नेछन्।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुले जीवनमा गति बढाउने अवसर पाउने छन्। प्रचार र पदोन्नति पनि सम्भव छ। यो वर्ष ब्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा धेरै सफलता मिल्नेछ। कडा परिश्रमका आधारमा सबै समस्याबाट बाहिर निस्कन पर्ला । यो वर्ष विद्यार्थीहरूका लागि राम्रो छ। यस वर्ष, कर्कट राशिका व्यक्तिले आफ्नो हरेक विषयमा सफलता प्राप्त गर्ने छन्। ठुलो निर्णयका कारण तपाईको परिवार तपाईबिरूद्ध उभिन सक्छ। यदि तपाईं कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने, २०२१ तपाईंका लागि एकदम राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य मामिलामा तपाईं सावधान रहनु राम्रो हुनेछ।
सिंह राशिका व्यक्ति दुश्मनमाथि हावी हुने योग रहेको छ। तपाई सबै कार्यहरू समयमै पूरा गर्न सफल हुनुहुनेछ । वित्तीय जीवनमा केही खर्च बढ्नेछ । तर कहिँबाट पनि पैसाको अभाव हुनेछैन। रोकिएको पैसा फिर्ता हुनेछ। तपाईं ऋणबाट मुक्त हुनुहुनेछ। विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले धेरै मेहनतपछि मात्र सफलता पाउने छन्। हरेक कार्यमा तपाईले आफ्नो जिवनसाथीको साथ र सहयोग पाउनुहुनेछ । आफ्नो जीवन खुशीका साथ बिताउने योग रहेको छ । यदि तपाई हालसम्म अविवाहित हुनुहुन्छ भने यस वर्षमा कोही खास व्यक्तिसँग मिल्ने योग छ।
नयाँ वर्ष २०२१ रोजगारी र जीवनका मामिलामा सामान्य देखिन्छ। यद्यपी व्यापार गर्नेहरूका लागि समय राम्रो छ। व्यापार साझेदारीमा फाइदा हुनेछ। ग्रह र नक्षत्रहरूको संयोजनका कारण आर्थिक जीवनमा केही समस्याहरू हुन सक्छन्। तर राहुको शुभ नजरले तपाईंलाई पैसा कमाउने थुप्रै अवसरहरू मिल्नेछ । कर्मको परिणाम शुभ हुनेछ। विद्यार्थीहरूले कडा परिश्रम गर्नु पर्नेछ। विवाहित जोडीले जीवनसाथीको सहयोगमा हरेक कार्यक्षेत्रमा लाभ उठाउन सक्छन्। यो वर्ष स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट तपाईंका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईंको साहस र पराक्रममा पनि वुद्धि हुनेछ।
तुला राशिका व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूले केही गोप्य श्रोतबाट फाइदा लिन सक्दछन्। तपाईं सक्रिय रूपमा धार्मिक काममा भाग लिनसक्नुहुनेछ। यस वर्षको मध्य भाग विद्यार्थीहरूका लागि उत्तम हुनेछ। यस समयमा विद्यार्थीहरू आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन सफल हुनेछन्। बच्चाहरूका लागि समय उत्तम छ। यदि तपाईं कसैलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष तपाईंको लागि राम्रो हुनेछ। प्रेम विवाहको गठन जस्तो देखिन्छ। यद्यपी स्वास्थ्यका हिसाबले विशेष ध्यान राख्नु पर्नेछ।
यस वर्ष तपाईले जीवनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। आर्थिक क्षेत्रमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेछ। तर अचानक खर्चले तपाईंको कठिनाई बढाउन सक्छ। कामका लागि तयारी गर्ने उम्मेद्वारहरूले यस वर्ष राम्रो समाचार प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सन्तान पक्षबाट राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो वर्ष त्यतिराम्रो देखिदैन्। खानपिनमा विषेश ध्यान दिनुपर्नेछ।
व्यापार गरिरहेका व्यक्तिहरुका लागी यो वर्ष राम्रो हुनेछ। व्यापार क्षेत्रमा असीम सफलता मिल्नेछ। वित्तीय स्थिति मजबूत हुनेछ। तर परिणाम रोजगारदाताहरूका लागि सामान्य हुनेछ। विद्यार्थीहरूले यस बर्ष शिक्षामा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। तपाईले विदेशमा पढ्ने अवसर पनि पाउनुहुनेछ। युवा भाइबहिनीका लागि यो वर्ष अनुकुल देखिन्छ। जीवनसाथीको खराब स्वास्थ्यका कारण जीवनमा तनाव बढ्नेछ। २०२१ ले प्रेमीहरूका लागि अत्यन्तै रोमान्टिक पल ल्याउन सक्छ।
यी राशिका व्यक्तिहरुले यो वर्ष जीवनमा कडा परिश्रम गरे मात्र राम्रो नतीजा प्राप्त गर्नेछन्। रोजगारीमा सामान्य परिणाम प्राप्त हुनेछ। यद्यपि यो वर्ष व्यवसायिक क्षेत्रमा शुभ हुनेछ। आर्थिक जीवनमा प्रारम्भिक केहि महिनाहरूमा समस्या हुनेछ । तर पछि पैसाको आगमनले तपाईंको वित्तीय संकट हटेर जानेछ। विद्यार्थीहरुले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। २०२१ मा आमालाई स्वास्थ्य समस्या देखिनसक्छ। घरमा खुशीको अभाव हुनेछ। एक विवाहित जीवनमा उदास अथवा निरासता महशुस हुनेछ।
कुम्भ राशि हुनेहरुका लागि नयाँ २०२१ त्यति राम्रो देखिदैन। विशेष गरी मध्य पछाडिको समय तपाईंका लागि प्रतिकूल हुनेछ। आर्थिक जीवनमा खर्च अचानक वृद्धि हुनेछ, जसका कारण केही समयका लागि आर्थिक संकट हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रका सम्बन्धमा यात्रामा जाने अवसर प्राप्त हुनेछ। तपाईले आफ्नो जीवनसाथीबाट मद्दतको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका लागी यो वर्ष स्वास्थ्य जीवनमा कमजोर हुन सक्छ।
तपाईंको जीवनले नयाँ नर्ष २०२१ मा गति प्राप्त गर्नेछ। व्यापारीहरुले पनि ब्यापार विस्तार गर्ने अवसर पाउने छन्। आर्थिक जीवनमा आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ। यद्यपि केही खर्च भने बढ्ने योग छ। पारिवारिक जीवन राम्रो हुनेछ । पैतृक सम्पत्तीबाट फाइदा हुन्छ। जीवनसाथीसंग सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। सन्तान पक्षले पनि अध्ययनमा राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन्। यदि तपाईं कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ ठूलो निर्णय लिन सक्ने योग छ। यस वर्ष प्रेम विवाह को पनि योग रहेको छ। तपईका लागी यो वर्ष स्वास्थ्यका दृष्टिले विशेष छ।
Prevदाग धब्बा हटाएर केही दिनमै अनुहार चम्काउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
Nextजान्नुहोस् भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ ?
महामारी होस् या बाढी पहिरोः मौन रहने यी स्टार